Female Engineering Students – HlaMin
Nan Khin Nwe
G-Hall Thu Reunions
Kabyar by Htay Htay Win (M87)
Kabyar by Soe Snu
Characteristics ofaG-Hall Thu
Laughter for Longevity
Gentle Ottara Breeze
Sone Gya Zoe
Khine Khine Win (Singapore)
U San Lin (Maung Lu Pay, M87)
Before 1958, there were no female engineering students.
In the early 1960’s, there wereahandful of female engineering students.
In November 1964, there were about 100. Several stayed at G-Hall (which was formerly assigned to young sayas.)
Thazin Hall became the second hostel for female students.
In the past few years, part of the A – E Block now houses young female students. It wasatopic for Ko Myint Pe’s cartoon.
Nan Khin Nwe is from the 83 Intake. Since the schools were closed for three years, she graduated in 1992. Many alumni lost three years of their precious lives.
She volunteered asaFund Raiser for SPZP-2012 and SPZP-2016. She then becameamajor Fund Raiser for
(a) RITAA (including YTU Library Modernization)
(c) Intake of 83 (including provision of equipment and medicine for cancer patients)
She helped with the selection for Scholarships awarded by NorCal RITAA. In the group photo she stood in the back row along with the seven young recipients. To her surprise and delight, Nan Khin Nwe was mistaken by some viewers asayoung YTU student.
She compiled Kabyars and some prose for the Second G-Hall Thu Reunion.
The first G-Hall Reunion was held on 28th January 2018. The backdrops were provided by Khin Maung Kyi and the photos were taken by Eric Foo.
The second G-Hall Reunion was held on 24th November 2018. There was lots of food and fun. Posters displayed short stories and poems written by G-Hall Thu’s and their admirers.
Invitation by Nan Khin Nwe
G hall သူများ (RIT ကျောင်းသူဟောင်းများ,သဇင်သူများ)တွေ့ဆုံပွဲကို
November 24th 2018 Saturday
RIT ကျောင်း စက်မှုခန်းမ
အခမ်းအနား ကို ၃ နာရီမှာစပါမယ်
Coffee & မုန့် ကျွေးပါမယ်
ညနေ ၅ နာရီ ဝန်းကျင်ခန့် lunch box ကျွေးပါမယ်
ခန်းမ ကို 2:00 to 9:00 pm ယူထားပါတယ်နော်
စောစောလာပြီး ဓာတ်ပုံရိုက် ဘာညာ
အလွမ်း သယ်လို့ရပါတယ်ရှင့် (အယ်လယ်)2
G hallသူ မဟုတ်ပေမဲ့ G hallသူ တွေကိုခင်မင်ကြတဲ့ RIT ကျောင်းသူဟောင်းများအားလုံးကိုလဲ ချစ်ခြင်းများစွာဖြင့်ဖိတ်ပါတယ်ရှင့်
ချစ်ချင်းများစွာဖြင့် ကူညီပေးမဲ့ sponsor များ
အမှတ်တရ ပန်းချီ ဓာတ်ပုံ ကာတွန်းများ
ကဗျာများ ဆောင်းပါး ဝတ္ထုတိုများကိုလဲ ကြိုဆို ပါတယ်ရှင့်
တော့ အကို ခင်မောင်ကြည် Khin Maung Kyi ရဲ့လက်ရာပါ
ဓါတ်ပုံ backdrop နဲ့ လှလှပပ မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံ
မောင်လေး ဖူးဖူး Eric Foo ပါ
Second G-Hall Thu Reunion
The Second G-Hall Thu Reunion is not only for G-Hall Thu but friends and admirers.
In response to Nan Khin Nwe’s request, several G-Hall Thu and some admirers submitted poems and short stories to be displayed (and possibly distributed as mementos) at the Reunion.
G hall သူ
By Ohnmar Myint
မဆိုရင် ညီအမ အလား
ပုပု ဝဝ ပိန်ပိန် ရှည်ရှည်
လှလှ ပပ ခန့်ခန့် ထည်ထည်
. “#အိုဘယ့်ဂျီဟောသူ “
ကမ္ဘာကို တည်ဆောက်မဲ့ လက်တွေပေါ့
အဆောင်ဘေးက ကန်စွန်းရွက်ပါမကျန် ။
. စာကြိုးစားမဟဲ့ လို့
တညလုံးလည်း မအားရပေါင် ။
. နေ့တွေ ညတွေ အမှတ်မှား
စာသင်ခုံ ရောက်မှ မှောက်အိပ်တတ်သူတို့ ။
လုံခြုံရေးက လာပေးတဲ့ စာကလေးတစ်စောင်
အိပ်မက်ထဲက မောင် . . မောင်များလား
ငွေ တစ်ရာ လောက် ချေးပါလားတဲ့ . . ။
G hall သူတွေ့ဆုံပွဲ
ညီမလေး ဥမ္မာအောင် Mon Mon ရဲ့လက်ရာလေးပါ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော်
ဂျီဟောသူမျက်နှာ စဉ်ချိုပြုံးလို့ 
ညဖက်မှာ အဆောင်ရှေ့ ဝဲလည်
ကဲတယ်နော့ ကိုလူပျိုတို့ 
လာကြံဖို့စိတ်မကူးလေနဲ့။
နန်းမြင့်သူ သဇင်ခက်ကဖွားတာမို့ 
လှမ်းဆင့်ယူ ချူ ဖို့ ရန်ခက်ပါတဲ့
စက်မှု ပျို များ။
# ရွှင်ကြည် မနောဖြူကြတဲ့
# ငါတို့ နှလုံးသားမှာ ထာဝရ ခိုအိပ်
ဘဝ အမောတွေကို ချွေးသိပ်တတ်တဲ့
လွမ်းမောစွာ ပြန်လည် ခံစားကြရအောင်။
# ဒီမြေမှာ စိမ်းလန်း၊ ရဲရင့်စွာ ခံ့ကျန်းခဲ့
သာမာန် မျက်စေ့ နဲ့တော့ ဘယ်မြင်နိုင်မလဲ၊
ဆန်းပြားစွာ တရောင်ထဲ ခြယ်
အဲဒါဟာ အဖြူ ထည် သက်သက်တဲ့။
# ရယ်ရွှင်ခြင်း ဟာသဥာဏ်
အပြန်အလှန် ပေးခဲ့ Nick Name များ
ငါတို့ ခြေလှမ်းကို ယိုင်စေခဲ့သူတွေ
သံဇကာကွက်ကြား က ဂျီဟော ရဲ့အမှတ်တရညနေများ
၁၅% ထဲမို့ အင်အားသုံး ဖိနှိပ်ခံခဲ့ရ
ခေတ်အဆက်ဆက်က ဂျီဟောသူများရဲ့ သမိုင်းကြွေး
# ချစ်ခြင်းသက်သက် နဲ့ထိတွေ့
( 7th Nov 2018)
Despite the jokes and cartoons about “Pone Ma Lar Yoke Soe Gyan Daw Myo”, many G-Hall residents are “Madee Chaw”.
ပုံမလာရုပ်ဆိုး ဂျမ်းတောမျိုးရယ်လို့ 
အမောင် တို့ ပြောင် ကဲ့ရဲ့ လှောင်လဲ
ရွှေနားတော်သွင်းဧချင်းများနဲ့ ညွှတ်တွားခယ တသသ ဖြစ်ဖူးကြပါတယ်လေ။
မျက်နှာလို မျက်နှာရ ဆက်သတဲ့
ခေါက်ဆွဲကြော် အဖေါ်တွေနဲ့ ဟား
အမောင်တို့ကြား
တကွဲစီပြန့် ကာကြဲပေမဲ့ 
အရင်းချာ ညီအမလိုခင်သူတွေမို့ 
ပြန်လည်ကာဆုံတွေ့ ဖို့ 
ဂျီဟောသူ တို့ ပွဲ ။
Overadozen — includingacouple of males — have composed poems about G-Hall. Some prefer to ink their feelings as prose.
Nan Khin Nwe posted :
G hall သူများတွေ့ဆုံပွဲ
အမ မြင့်မြင့်ရီ 1986 Mech ရဲ့လက်ရာ လေးပါရှင့် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်အမရေ
ဂျီဟောသူ တွေ့ဆုံပွဲ ဒုတိယအကြိမ်အတွက်
ကဗျာလေးတွေတစ်ပုဒ်ပြီးတစ်ပုဒ်ပေါ်ထွက်လာတာနဲ့အမျှ လက်ရာတွေကလဲ ပိုပိုပြီး သွက်လာ ထက်လာ ချစ်စရာကောင်းလာပါတယ်
အေ တူ ဖက် ဆောင်ကမောင်တွေ
အလှတွေပိုနေတဲ့ ဂျီဟောရဲ့ ညနေညိုတွေကိုလွမ်းတယ်
ညဖက်မှာ ရန်ကုန်လေဆိပ်က တက်လာတဲ့
နိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းက လေယာဉ်ကြီးတွေကို အိပ်ရာပေါ်ပက်လက်အိပ်ရင်းကြည့်ခဲ့ရတဲ့ညတွေကိုလွမ်းတယ် မီးရောင်တစ်လက်လက် နဲ့လေ
လက်ဖက်စားစရာအစုံနဲ့ စကားဖောင်ဖွဲ့ ရင်း
မောင်နှစ်မ ဆောင်တွေ အတူတွဲရင်း နွှဲခဲ့ကြတဲ့
လစဉ်လတစ်လရဲ့ ကြာသာပတေးနေ့တနေ့ မှာရမြဲ အသားဟင်းအတုံးကြီးကြီးတစ်တုံးပါဝင်တဲ့
ညစာ၊နဲ့ ဗီဒီယို(ကြည့်ရှုခွင့်)ရရှိတဲ့ special dinner
တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး တစ်ကြော်ကြော် ဟစ်ခေါ်
အသီးသီး မ လို့ စာသင်ခန်းလှမ်းနေကြတဲ့
ငယ်ဖော် ဂျီဟောသူ တွေကိုလဲလွမ်းတယ်
အဆောင်မှာအတူနေ မကြာမကြာ ရန်တွေဖြစ်
ပြီးရင် ပြန်ချစ်ကြမြဲ အသည်းလေးတွေ(ချစ်သူငယ်ချင်းလေးတွေ)လဲလွမ်းတယ်
အထွေထွေ ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ မတွေ့ဖြစ်ကြပေမဲ့
ဂျီဟောသူဘဝ နေ့နဲ့ည များစွာ
တို့ပြန်လည်ဆုံကြဖို့ စီစဉ် နှစ်လီ နှစ်ကြိမ်တိုင်ခဲ့ပြီ
ရက် လ နှစ် များစွာပြောင်း
တို့ကွန်းခိုရာ နေရာအို ပျိုမျစ်ခြင်းတွေမရှိတော့ပေမဲ့
Young RIT alumni in Singapore (including Khine Khine Win) are trying their best to help their alma mater.
Many alumni feel sad about the decline of the Education System in Myanmar and about the attempt by the Adhamma regime to destroy the Swel Daw Bins and the indomitable RIT (Swel Daw Yeik) Spirit.
Our alma mater may not rank high in the academic world, but the tradition and culture (e.g. SPZPs, paying back the metta and cetana of the mentors) remain.
Vedana stands for feeling. There are pleasant feelings, unpleasant feelings, and not-pleasant & not-unpleasant (probably neutral) feelings.
Khine Khine Win wrote :
ပြီးခဲ့တဲ့လက မြန်မာနိုင်ငံက ကလေးတွေ စင်္ကာပူပညာရေးခရီးစဉ်မှာ အစစစီစဉ်ဆောင်ရွက်လိုက်ပါခဲ့တယ်…
ဒီလ စင်္ကာပူနိုင်ငံက Polytechnic က ကလေးတွေကို မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးခရီးစဉ်မှာ အစစစီစဉ်ဆောင်ရွက်လိုက်ပါခဲ့တယ်… (ခရီးစဉ်အကြောင်းလေးကို ခရီးစဉ်ပြီးမှ စာတပုဒ်ရေးပါမယ်)
သူတို့ ဆီက Polytechnic မှာ ကိ်ုယ်တို့ ဆီက ကလေးတွေ လေ့လာကြတယ်…
ဒီနေ့ကိုယ်တို့ နိုင်ငံက ကိုယ်တို့ ရဲ့တက္ကသိုလ်ဖြစ်တဲ့ အာအိုင်တီနဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို သူတို့ ဆီက ကလေးတွေ လေ့လာကြတယ်…
ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ ကိုယ့်ကျောင်းကို ပတ်ပြရင်း ဝမ်းနည်းလာတယ်…
ဒါပေမယ့် သူတို့ ဆီမှာ မရှိတဲ့ culture တခုကို ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် အတော်ဝမ်းသာကြည်နူးမိပါတယ်… အဲဒါကတော့ ကိုယ်တို့ ရဲ့မျိုးဆက်သစ်လေးတွေအတွက် ကျောင်း library project အတွက် အာအိုုင်တီမျိုးဆက်ဟောင်း၎ဦးပါတဲ့ ကိုယ်တို့BAI company က အလှူငွေ၅သိန်းလှူခဲ့တာလေးကိုပါ.. မျိုးဆက်ဟောင်းတွေက မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် ပေးဆပ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုလေးကို သူတို့ အတော်အံ့သြသွားကြပါတယ်…
ဝမ်းနည်းဝမ်းသာ ဖီလင်တွေကာရံမညီတဲ့နေ့ တနေ့ ပါပဲ…။
U San Lin (Maung Lu Pay, M87) has consolidated the postings by Nan Khin Nwe and me.
တချိန်သောအခါက အာအိုင်တီကျောင်းတော်မှာ ပညာသင်ကြားကြသော ပျိုပျိုမေကျောင်းသူတွေ ခိုနားရာအဆောင်လေးကို ဂျီဟော(G Hall) ဟူ၍ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ ထိုဂျီဟောဆောင်မှ အင်ဂျင်နီယာပျိုမေများကား အခုအချိန်တွင် အင်ဂျင်နီယာအန်တီကြီးတွေ အန်တီလေးတွေ ဖြစ်နေကြပေပြီ။ ထိုပျိုမေများကို ဂျီဟောသူဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ပါ၏။
ဂျီဟောဆောင်သည် ဗမာ့စက်မှုတက္ကသိုလ် BIT(Burmese Institute of Technology) ခေတ်အခါက ဆရာအချို့၏ခိုနားရာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် RIT(Rangoon Institute of Technology) ဟူ၍ ပညာရေးစနစ်သစ်ကို ပြောင်းလည်းခဲ့သော ၁၉၆၄ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှစပြီး ‘ဥတ္တရဆောင်’ ဟူသောအမည်သစ်ဖြင့် စက်မှုကျောင်းမဟာမှာပညာသင်ကြားကြမည့် အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသူ ပျိုပျိုမေများအတွက် သီးသန့်အဆောင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဥတ္တရဟူသည် မြောက်အရပ်မို့ မြောက်ဆောင်ဟု အမည်ရသောကြောင့် မြောက်(မျောက်)ဆောင်အမည်ကို မည်သူမျှမခေါ်ကြပဲ ဂျီဟောဟုသာ ဆက်လက်ခေါ်တွင်ခဲ့ကြသည်။
နယ်မှရောက်ရှိလာကြသူ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသူ ပျိုပျိုမေများအတွက်သာမက ရန်ကုန်မှ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသူများ နေထိုင်ရေးအခက်အခဲရှိပါကလည်း လက်ခံပေးခဲ့သည့် အစဉ်အလာရှိခဲ့သည်။
ဂျီဟောသူပျိုပျိုမေများအထဲတွင် မင်းသမီးရှုံးအောင် ဖလန်းဖလန်းထသူများရှိခဲ့သလို ဝါတော်ခြောက်ဆယ်ရ သီလရှင်ဆရာကြီးအလား မျက်နှာထားတည်စွာဖြင့် မပြုံးမရယ် ရှုတည်သူများလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းကို ကျောင်းသားကာတွန်းဆရာများက ကျောင်း၏ကာတွန်းဘောက်စ်(Cartoon Box) တွင် ရေးဆွဲခဲ့ကြဖူး၏။
ဂျီဟောသူဟူသည့် နာမည်ကျော်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကို ရေးသားခဲ့သူမှာ ဂျီဟောသူဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သော စာရေးဆရာမမစန္ဒာ (ဒေါ်ချိုချိုတင်) ဖြစ်ပါ၏။
ဂျီဟောသူပျိုပျိုမေများမှာ အင်ဂျင်နီယာမကြီးများ ဖြစ်သော်လည်း ကဗျာရေးရာတွင်လည်း ထူးချွန်လှပါ၏။ ထိုဂျီဟောသူများထဲမှ ဒေါ်ကြူကြူသင်းရေးသောကဗျာလေးကို တင်ပြပါရစေ။
**ရွှေကံကော်နဲ့ပန်းစွယ်တော်တွေကြားအမိတက္ကသိုလ်မှာ ငှားငှားစွင့်ပွင့်ပါတဲ့ ပန်းတွေရဲ့ သခင်ဆိုလဲမမှား!!
***A to F ကိုကို မောင်မောင်တို့ ရွှေစွန်ညိုပွဲမှာ ရွှေသဲကျော် မယ်ထွေး ရွှေ G လေးရယ်ဆို….,,,, ဘယ်သူဘယ်ဝါ ရှာကာတွေးမနေပါနဲ့>>>>
****မောင် အင်/ယာတွေကို ရင်ဘောင်တန်းပါလို့.., မယ် အင်/ယာ ဆို ထင်ပေါ်ကာ စင်တော်ကောက်ခံရပါတဲ့..,
*****ရွှေဂန္တဝင် G hall သူရှင့် !!! ပါတဲ့။
ဂျီဟောသူများ၏ လေးကြိမ်မြောက် reunion ပွဲအတွက်လည်းကဗျာတွေ စာတွေရေးထားကြတာ ဖတ်ရ၏။ အင်ဂျင်နီယာမကြီးများ၏ ကဗျာများကား ပြောင်မြောက်လှသဖြင့်ဆက်လက် တင်ပြပါရစေ။ မဥမ္မာမြင့်၏ ကဗျာကား ဧည်သို့ဖြစ်၏။
နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင် လှမ်းကြမယ့်သူ။” တဲ့။
နောက်တစ်ယောက်သော ဂျီဟောသူ၏ ကဗျာကလည်း မခေ။
ဂျီဟောသူ တို့ ပွဲ ။”
၇ .၁၁.၁၈ ပါတဲ့။
အနှီအနှီ ကဗျာရေးကောင်းကြသောဂျီဟောသူများ၏ကဗျာများကို ဆက်လက်တင်ပြပါရစေ။
ငယ်သူငယ်ချင်း ဌေးဌေးဝင်း(ဒိုက်ဦး) ရဲ့ ကဗျာလေးလည်း ခံစားကြည့်ပါဦး။
ကဗျာများစွာကျန်ရှိနေပါသေး၏။ မူရင်းကဗျာဆရာမများ(ဂျီဟောသူများ) ကို ခွင့်မတောင်းပဲ ကိုယ့်ဝေါမှာ တင်လိုကိမိသည့်အတွက်လည်း ကဗျာပိုင်ရှင်မမ၊ညီမ ဂျီဟောသူအပေါင်းအားတောင်းပန်အပ်ပါ၏။
ဂျီဟောကား မောင်လူပေနှင့် မစိမ်းပါ။အာအိုင်တီမှာ ခေတ္တကွန်းခိုဖူးခဲ့သူများနှင့်လည်း စိမ်းမည်မထင်။ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းမို့ မိန်းကလေးရှားသည်။ ရှားပါးလှသောအင်ဂျင်နီယာကျောင်းသူ ဂျီဟောသူများမှာလည်း စာဂျပိုးတွေကများများ။ စာဂျပိုးမဟုတ်ပဲ ဗရုတ်ကျခဲ့သည့် ဂျီဟောသူအပေါင်းလည်း မနည်း။ ဂျူဒိုလက်ရွေးစင်၊ ခရာတေးခါးပတ်နက်ဂျီဟောသူတွေလည်းပါခဲ့၏။ အလှပဂေးတွေလည်း ရှိခဲ့လေတော့ ဂျီဟောဆောင်နှင့် မစိမ်းခဲ့တာ ဘာဆန်းမည်နည်း။
ဂျီဟောဆောင်ထဲမှ ဂျီဟောသူများနှင့် နီးစပ်လိုပါသော်လည်း သတ္တိအခံကခေါင်းပါးခဲ့သဖြင့် ဂျီဟောရှေ့မှာ လျှောက်ပြန်သံပေး၊ ခြေအေးဝမ်းယောင်၊ ချောင်းကြည့်ပြုံးပြန်၊ ချုံတိုးခြင်ကိုက်၊ ညောင်းကိုက်ဒူးနာ၊ အအေးပတ် အသံဝင် ဘဝများဖြင့် ပေးဆပ်ခဲ့ဖူးကြကုန်သော အာအိုင်တီကျောင်းသားများလည်းမနည်းလှသဖြင့် ထိုကျောင်းသားများအား အထူးအခွင့်အရေးပေးသည့်အနေဖြင့် အထူးဧည့်သည်တော်များအဖြစ် ဂျီဟောသူတွေဆုံပွဲမှာ ဖိတ်သင့်ပါကြောင်း ထပ်လောင်းတင်ပြရင်း ဂျီဟောအမှတ်တရ ဆောင်းပါးလေး အဆုံးသတ်ပါရစေ။
( ဆရာဦးလှမင်း၊ နန်းခင်နွဲ့တို့၏ ဖေ့ဘွတ်မှ ဓါတ်ပုံ၊ကဗျာများ စာများကို ခွင့်မတောင်းပဲ ခပ်တည်တည် ယူ၍ရေးသည်။ ကဗျာပိုင်ရှင် ဂျီဟောသူအပေါင်း ကဗျာဖိုးတောင်းလိုပါက ယူအက်စ်သို့ ကြွရောက်တောင်းယူနိုင်ပါကြောင်း။😄)
RIT has produced Ah Nu Pyinnya Shins in general, and Laureate Poets (such as Tekkatho Moe War, Maung Sein Win [Padeegone]) in particular.
We appreciate the excellent Kabyars from the G-Hall Thu Myar. They can be displayed as wall posters, flyers and may be even booklets at the forthcoming G-Hall Reunion.
G => Gorgeous girls (at their prime)
H => Highly intelligent and creative (decades after graduation)
A => Ambitious, articulate
L => Lively rebuttals to the jokers and cartoonists
L => Love me dearly OR “Beware, our T-square”
T => Talented poets
H => Home of the Belles
U => Union of five Balas : Kaya, Nyana, Bawga, Meikta, Caritta
Thanks to sayas and alumni for sharing the photos from the G-Hall Tazaungdaing.
RIT Alumni (GBNF)